विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्ले बनायो वार्षिक कार्ययोजना::Best News Experience from Nepal
बुटवल । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याणकारी परिषद्को तेस्रो बैठकले वार्षिक कार्ययोजना निर्माण लगायतका विभिन्न निर्णय गरेको छ । परिषद्का अध्यक्ष कमल रायमाझीको अध्यक्षता र सचिव बीपी गौतमको सञ्चालनमा सम्पन्न बैठकमा सल्लाहकार सिद्धिचरण भट्टराईको आतिथ्यता रहेको थियो ।
बैठकले परिषद् पुनःगठनपछि हालसम्म भएका कामहरुको समीक्षा गर्दै वार्षिक कार्ययोजना निर्माण गरेको सह–सचिव नरेश केसीले जानकारी दिए । बैठकले कल्याणमित्र सन्देश प्रकाशनलाई निरन्तरता दिन मोहन राना संयोजक तथा डी. आर. बञ्जाडे र निर्मल ढुंगाना सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको छ ।
यस्तै वनभोज गर्न मधु पाण्डे संयोजक र राजेश थारु सदस्य, नयाँ विद्यार्थी स्वागतका लागि जनार्दन लोध संयोजक र यज्ञ न्यौपाने सदस्य, चार धाम भ्रमणका लागि नरेश केसी संयोजक र प्रकाश अर्याल तथा दिनेश आचार्य सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको छ ।
पालिकास्तरीय बुद्ध शिक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रियाका लागि देवदहमा जयकिशन अधिकारी, तिलोत्तमामा बीपी गौतम, तौलिहवामा सनिउल्लाह धोवीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी बुद्ध शिक्षा हाजिरीजवाफ तथा खेलकुद सप्ताह गर्न जयकिशन अधिकारी संयोजक र प्रकाश अर्याल तथा कमल न्यौपाने सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरिएको छ ।
बैठकले परिषद्को कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामाग्रीको बन्दोबस्ती गर्ने जिम्मेवारी सचिव बीपी गौतमलाई दिएको छ ।